Smartwatches mifanentana amin'ny Android tsara indrindra. Androidsis
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, hitantsika ny fahita matetika kokoa ny mahita ireo mpampiasa manana fehin-tànana miisa amin'ny tànany, fehin-tànana ahafahan'izy ireo manara-maso ny asany ara-batana rehetra mandritra ny tontolo andro, na dia tsy manao fanatanjahan-tena aza izy ireo. tsy manolotra antsika ny tombony rehetra azon'ny smartwatch izy ireo.
Ny Smartwatches dia mamela antsika hahalala amin'ny fotoana rehetra, tsy ny fanatanjahantena na ny fanaontsika mahazatra mandritra ny andro ihany, fa ahafahantsika mahazo fampandrenesana azon'ny finday avo lenta amin'ny tanantsika, fampandrenesana ahafahantsika mifanerasera nefa tsy mila manala ny smartphone amin'ny paosy na kitapo.
Amin'ny 19 martsa dia mankalaza ny fetin'ny ray isika, andro iray izay ahafahan'ny ray aman-dreninao (na ny tenanao raha efa misy ianao, azafady fialantsiny) manomboka miala amin'ny braselezera manisa izay matetika ampiasainao handraisana famantaranandro marani-tsaina, famantaranandro izay manome antsika ny fiasa mitovy amin'ny fehin-tànana fa miaraka amin'ny fampandrenesana miampy, zavatra tena ahazoana aina izany Mety tsy hizara ianao raha tsy ampiasainao.
Raha mitady finday finday avo lenta ho fanomezana / ho anao ianao dia hasehonay anao izay no smartwatches tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny.
4 Samsung Galaxy Active
6 Samsung Galaxy Gear S3 Frontier
9 Iza no maodely tsara kokoa?
TicWatch dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra tsara indrindra ananantsika amin'izao fotoana izao raha te-hiditra amin'ny smartwatches isika. Fiainana bateria vdia eo anelanelan'ny 2 sy 30 andro, arakaraka ny maody nosafidintsika. Mampiditra bezel vy tsy misy fangarony ho fanampin'ny fonony aoriana.
Ny fehy, ny hoditra italiana tena izy manolotra antsika kalitao izay tsy dia hitantsika loatra amin'ireo mpanamboatra hafa. Ny TicWatch Pro dia tantanan'ny Wear OS, tsy tantera-drano izy ary mahatohitra vovoka miaraka amin'ny fanamarinana IP68, ka tsy ho olana ny hatsembohana. Ho fanampin'izay, manana chip NFC izy mba hahafahantsika mampiasa azy handoavana ny vola isan'andro.
Ny TicTac Watch Pro dia manome antsika efijery 1,39-inch miaraka AMOLED miaraka amin'ny famahana 400 × 400. Izy io dia tantanan'ny fikirakira Snapdragon Wear 2100, manana tahiry 4 GB ary mampiditra chip GPS hanarahana ny asantsika ara-panatanjahantena amin'ny fotoana rehetra.
Izy io koa dia manome antsika fampiasa marobe ho an'ny fahasalamana sy ny fahasalamana noho ireo fampiharana efa napetraka mialoha momba izany. Ny vidin'ny TicWatch Pro dia 244,99 euro, fa afaka manararaotra ny fihenam-bidy 30 euro atolotra antsika hankalazana ny fetin'ny ray isika, no vidiny farany 214,99 euro.
Ny maodely iray hafa apetrak'i TicWatch eo am-pelatanantsika ao amin'ny C2, ilay taranaka faharoa amin'ny karazana smartwatches kanto ary manome antsika fitambarana endriny tonga lafatra. Ny ivelan'ny C2 dia vita amin'ny akora premium ary manome antsika fampiasa maro an'isa noho ny fitantanan'ny Wear OS azy. Ny vidin'ny TicWatch C2 dia 199 euro.
Manolotra antsika ny TicWatch C2 Sarimihetsika AMOLED 1,30-inch miaraka amina vahaolana 360 × 360 miaraka amin'ny fitehirizana 4 GB, GPS, bateria 400 mAh ary manolotra chip chip NFC handoa vola amin'ny smartwatch anay. Voamarina IP68 izy io ary toy ny sisa amin'ny laharana Mobvoi, dia mifanaraka amin'ny Android sy iPhone.
Mividiana Ticwatch C2 amin'ny Mobvoi
Raha mikasa ny handany vola kely kokoa izahay, Mobvoi dia manome antsika ny TicWatch E2 / S2, maodely vitsivitsy izay manana miaraka amin'ny teknolojia TicMotion, izay mihoatra ny fanisam-bato sy ny kajy kaloria. Izy io dia ampiasain'ny algorithman Artificial Intelligence izay manatsara ny fahaizan'ny fitaovana maodely roa tonta.
Ny TicWatch E2 dia manome antsika efijery AMOLED 1,39 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana 400 × 400 miaraka amin'ny fitehirizana 4 GB, GPS, bateria 415 mAh. Azo alentika hatramin'ny ATM 5 (mety tsara amin'ny filomanosana) fa dia tsy manome chip Chip NFC handoa vola.
Ity modely ity dia natao ho an'ny olona tia fanatanjahan-tena sy lomano, manome antsika bateria maharitra be. Ny vidin'ny TicWatch E2 dia 159,99 euro ary misy amin'ny Amazon.
Ny Samsung Galaxy Active no maodely farany indrindra natolotry ny orinasa koreana Samsung an-tsena, maodely izay manome antsika fiasa mitovy amin'ny an'ny Galaxy Watch, fa mifantoka amin'ny hetsika ara-panatanjahantena. Ny rafitra fikirakirana tsy misy tariby dia ahafahantsika mameno ny fitaovana amin'ny alàlan'ny toby famahanana tsy misy tariby, anisan'izany ny Galaxy S10.
Raha hitantana ny Galaxy Watch Active, Samsung dia miloka indray amin'ny Tizen, ny rafitra fiasany manokana tsy tokony hanahy momba ny fanjifana bateria isika Wear OS dia zatra amintsika amin'ny fitaovana rehetra tantaniny.
Ny Galaxy Wath Active dia ampiasain'ny processeur Exynos 9110 (novokarin'i Samsung). Manolotra antsika efijery 28 mm miaraka amina vahaolana 260 × 260 Super AMOLED miaraka amin'ny asan'ny Always On. Mahatratra 230 mAh ny bateria ary manana memoara anatiny 4 GB. Ny Galaxy Watch Active dia vidin'ny 249 euro.
Vidio ny Samsung Galaxy Watch Active
Ny Samsung Galaxy Watch no fanoloana voajanahary an'ny Galaxy Gear S3, maodely efa lasa iray amin'ireo malaza indrindra eny an-tsena, raha tsy mandray ny Apple Watch izahay. Ny Galaxy Watch dia tantanan'i Tizen, ny rafitra miasa noforonin'i Samsung, rafitra miasa izay manome antsika fampiasa tsara sy fanjifana bateria.
Ary koa, isaorana ny satroboninahitra mihodina, afaka mifandray amin'ny menus samihafa amin'ny fomba tena milay sy tsotra isika. Na eo aza ny fitantanana Tizen, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Samsung Wearables, azontsika atao ny mampiasa azy amin'ny Android na iOS terminal ary amin'izany dia mankafy ireo fiasa rehetra atolotray antsika.
Ny Galaxy Watch dia manome antsika savaivony 46 mm, efijery Super AMOLED misy vahaolana 360 × 360, 4 GB RAM. Manana fanamarinana IP68 (mahatohitra ny rano sy ny vovoka), ny haingam-pandeha, ny altimetrika, ny fo ho an'ny fo ... Ny vidin'ny Samsung GAlaxy Watch dia 299 euro.
Vidio ny Samsung Galaxy Watch
Na dia marina aza izany taona ity modely ityRaha mitady smartwatch feno vita amin'ny kalitaon'ny Samsung manome antsika ianao, ny Gear S3 dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ananantsika eny an-tsena ankehitriny. Toy ny maodely rehetra navotsotra hatrizay, ary toy ireo teo alohany, dia tantanan'i Tizen, rafitra fiasan'i Samsung.
Ny satro-boninahitra mihodina dia iray amin'ireo fiasa manintona indrindra omen'ity modely ity antsika, satroboninahitra izay azontsika atao tantano ny fiasa sy ny safidy rehetra atolotray antsika ity maodely Samsung mahafinaritra ity, izay mbola lavitra ny lalana hanohizany ny tolona. Ny vidin'ny Galaxy Gear S3 rehefa natomboka dia 349 euro, fa amin'izao fotoana izao, Azontsika jerena amin'ny vidiny 179,99 euro any Amazon izany.
Ny Samsung Galaxy Gear S3 dia manome antsika a Efijery Super AMOLED 1,3 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana 360 × 360. Ao anatiny no ahitantsika ny puce GPS, mpandahateny ary batery 380 mAh. Manana fanamarinana IP68 (mahatohitra ny rano sy ny vovoka), ny haingam-pandeha, ny altimetrika, ny fo ho an'ny fo ...
Vidio ny Samsung Gear S3 Frontier
Rehefa nanomboka nihamalemy ny varotra braseleaux quantifying, noho ny firongatry ny fifaninanana avy amin'ny tsena aziatika, ny orinasa Fitbit dia afaka naneho ara-potoana tamin'ny fandefasana modely vaovao, maodely nifantoka tamin'ny fanomezana endri-javatra fanampiny. Amin'izany fomba izany, i Fitbit dia manome ny Fitbit Ionic sy ny Fitbit Versa ho antsika, ity farany misy amin'ny maodely telo samihafa ho an'ny mahafeno ny filan'ny mpampiasa rehetra.
Fitbit dia manolotra modely telo ao anatin'ny elanelan'ny Versa: Versa Lite, Versa ary Versa Fanontana Manokana, fitaovana ahafahantsika refesina ny dingana sy ny kaloria, araho ny torimaso sy ny tahan'ny fo 24 ora isan'andro, bateria maharitra 4 andro, tsy tantera-drano ka hatramin'ny 50 metatra, fomba fanatanjahan-tena samihafa, fampandrenesana finday avo lenta ary fanaraha-maso ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny fahavokarana.
Ireo fiasa rehetra ireo dia misy amin'ireo maodely telo amin'ny laharan'ny Versa. Na izany aza, te hanana altimeter amin'ny tanany koa izahay, manisa ny hetsika ara-panatanjahantena mandritra ny lomano, mitahiry ary mitendry mozika, chip NFC ary mampiseho ny fanazaran-tena eo amin'ny efijery tsy manome azy ireo ny kinova Lite, noho izany dia tsy maintsy hampiasa ilay kinova Versa na Versa Special Edition izahay.
Raha mitady finday avo lenta hanaovana fanatanjahan-tena isika, ankoatra ireo maodely samihafa atolotray antsika Garmin, Fitbit dia manome antsika ny Ionic, smartwatch izay azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro sy rehefa manao fanatanjahan-tena na ao an-trano na any ivelany.
Ny Fitibt Ionic dia manolotra antsika fampiofanana manokana amin'ny efijery, manana chip GPS mifangaro izy io, sensor ho an'ny tahan'ny fo, fiainana batterie 5 andro, ary ny fahafaha-mitahiry sy mitendry ny mozika ankafizinay. Izy io koa dia mampifangaro achip NFC ary mifanaraka amin'ny fampandrenesana azonay amin'ny finday avo lenta, fampandrenesana fa afaka mamaly haingana avy eo amin'ny tanantsika.
Ho fanampin'izany, i Fitbit dia manolotra andian-tadiny izay ahafahantsika manamboatra ny famantaranandronay araka ny fotoana misy azy, ary samy manana kofehy vita amin'ny hoditra sy vy isika. Ny vidin'ny Fitbit Ionic dia 199,95 euro.
Mividy Fitbit Ionic
Iza no maodely tsara kokoa?
Ny maodely rehetra nasehoko anao etsy ambony, dia mety tanteraka ho an'ny mpampiasa rehetra mila smartwatch. Araka ny hitanao, ny ankamaroan'ny modely dia boribory, afa-tsy ireo maodely atolotry ny Fitbit antsika, izay toradroa kokoa.
Mikasika ny mifanentana amin'ireo rafitra miasa, na iOS na Android, ny modely rehetra dia mampiasa fampiharana manokana hifandraisana amin'ilay fitaovana, noho izany tsy hahita olana isika.
Raha zatra nandoa tamin'ny finday izahay, Tokony hifidy modely miaraka amin'ny chip NFC isika, mba handoavana ny vidin'ny fividianana tsy tapaka nefa tsy mila esorintsika eo am-paosinao ny finday avo lenta.
Raha te hanambatra ny fitafiantsika amin'ny famantaranandro isika, dia tsy maintsy dinihintsika ihany koa raha toa ka omen'ny smartwatch antsika ny mety manova fehy, zavatra izay omen'ny maodely vitsivitsy ho antsika ary anisan'izany ny Galaxy Watch, Galaxy Gear S3 ary Fitbit Ionic.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny smartwatches tsara indrindra omena amin'ny fetin'ny ray
Azonao atao izao ny misoratra anarana amin'i Harry Potter: Wizards Unite ary miomana amin'ny zava-misy mihabe